बकवास-राजनीतिको माकुने प्रवृत्ति
Warning: getimagesize(article_uploaded_files/34f48jhalak_tiwari_173125840.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
यो एउटा त्यस्तै बकवास हो, जसरी माकुने र केही उनका सहयोगी अखबारहरूले भक्तमान अपहरणकान्डमा गरेका थिए ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा संकीर्ण स्वार्थका खातिर झूटो बोल्ने गलत संस्कार अचेल फस्टाउँदै गइरहेको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै कैयौँ अपराधीले कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । खासगरी माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि सेना र राजनीतिक दलका नेताद्वारा अपराधीले गरेका कार्यलाई 'माओवादीले गरेको' ठोकुवा गर्दै भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्ने अभियान नै चल्यो । युद्धकालमा पनि माओवादीले आफूले गरेको कामको जिम्मा लिने, गल्ती गर्ने कार्यकर्तालाई कार्बाही गर्ने र कतिपय गर्न नहुने कार्य भएको भन्दै क्षमा माग्दै राजनीतिक इमानदारिता देखाउँदै आएको थियो । पछिल्लो शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि भने केही नेताहरू यस्ता बकवास गर्न केही हच्किएका थिए, तर माकुने सरकारको गठनसँगै पुनः यस्तै भाषा बोल्ने क्रम वृद्धि हुन गयो ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने र अपराधी लुकाउन आफैँ निरपराधीलाई अपराधी घोषणा गर्ने कुकर्म गर्दै आएका कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री माधव नेपालले फेरि एकपल्ट झूटो बकवास गरेको चर्चा हुन थालेको छ । प्रसंग ओखलढंुगाका एमाले नेता छवि कार्कीको हत्याको हो । केही अज्ञात अपराधीद्वारा उनको हत्या भयो । तर, माकुनेले हत्या माओवादीले गरेको घोषणा गरे । यो एउटा यस्तै बकवास हो, जसरी माकुने र केही उनकै सहयोगी अखबारहरूले भक्तमान अपहरणकान्डमा गरेका थिए । भक्तमान प्रकरणमा एमाले युथफोर्सले पनि आयोग बनाएको थियो । पोखरातिरका अपराधीलाई सहयोग गर्दै आएका राजीव पहारीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले पनि माओवादीले नै अपहरण गरेको घोषणा गर्‍यो, तर बाँचेर आएका भक्तमान र माकुने सरकार मातहतकै प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले आफ्नै प्रधानमन्त्रीको भनाइ बकवास भएको पुष्टि गर्‍यो ।
माकुनेको बकवास यतिमा मात्र सीमित थिएन । बुटवलमा मारिएका व्यापारी दम्पती र वीरगञ्जमा मारिएका हिन्दू युवाको हत्यामा पनि उनले माओवादीलाई आरोप लगाउन चुकेनन् । तर, तथ्यहरूले यी कुरा पुष्टि गरेनन् । उल्टै माकुने कतै अपराधी बचाउन नियोजित रूपमा झूट बोल्दै छन् कि भन्ने आशंकालाई पुष्टि गर्ने काम गर्‍यो । अहिले यस्तै बकवासपूर्ण घोषणा माकुनेले कार्की हत्यामा पनि गरेका छन् ।
अहिलेसम्मका गतिविधिमाथि पूर्वाग्रह नराखी हेर्ने हो भने माओवादीले आपराधिक कार्य गर्नका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई हतियार बाँडेको देखिँदैन । हिजो माओवादी पार्टी जनयुद्धमा थियो, र त्यो घोषित युद्ध थियो । आज माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छ, र उसले घोषित रूपमा र संसारले देख्ने गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको छ । विरोधीहरूले हतियारकै बलमा माओवादीलाई सिध्याउने षडयन्त्र गरे भने माओवादीले घोषणा नै गरेर, जनतालाई सूचित गरेरै हतियार चलाउन सक्छ । त्यसैले अहिले हतियार र सेनालाई राष्ट्रसंघको सुपरीवेक्षणमा राखेर माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छ । त्यसरी घामजस्तै छर्लंग व्यवहार गर्दागर्दै पनि माकुनेलगायतकाहरू किन माओवादीलाई बदनाम गर्न यस्ता बकवास गर्दै हिँड्छन् ?
१. नेपाली जनताको शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न उनीहरू कुनै आपराधिक षडयन्त्र गर्न चाहन्छन् । जसका निम्ति देशभित्र र बाहिरका केही आपराधिक तत्त्वहरूसँग उनीहरूको साँठगाँठ रहेको देखिएको छ । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि नै एक सयभन्दा बढी माओवादी नेता र कार्यकर्ताको हत्या गराउन सफल हुनुले यो तथ्य पुष्टि गर्दछ ।
२. संसारभरका साम्राज्यवादीहरू आफ्ना गुप्तचर सञ्जालमार्फत जनताका लोकपि्रय राजनेताहरूको हत्या गरेर आफ्नो आयु लम्बाउन चाहन्छन् । तिनै गुप्तचर संस्थाहरूले राजधानीलगायतका स्थानमा गम्भीर प्रकृतिका हत्या गराउँदै र कानुनको नजरबाट आफूलाई बचाउँदै आएका छन् । 'मालिक×'लाई बचाउने दासधर्मअनुसार नै माकुने पनि अपराधी बचाउन बाध्य देखिन्छन् । जमिम शाह हत्याकाण्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यद्यपि नेपाली जनताले एमालेका पूर्वमहासचिव मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्र शाहको हत्यामा पनि विदेशी संलग्नता र देशका शासकहरूको निरीहता अनुभव गरेकै विषय हो ।
३. माओवादी पार्टीलाई यिनीहरूले आफ्नो वर्गबैरी सम्झन्छन् । माओवादी शान्तिपूर्ण ढंगले नेपाली समाजमा क्रान्ति गर्न चाहन्छ । जसबाट राज्यका किसान, मजदुर, महिला, दलित र उत्पीडितहरू, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले विशेषअधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसबाट माकुनेले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग विदेशी दलाल, नोकरशाह र सामन्तहरूको अधिकार सीमित हुन्छ वा कटौती हुन्छ । यसै कारण माओवादी पार्टीको लोकपि्रयतामा उनीहरू आफ्नो मृत्यु देख्छन् ।
४. नेपालमा यतिखेरको राजनीतिक गत्यावरोधको वास्तविक कारण देश फेरि पनि गुलाम नै बनिरहने वा स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रका रूपमा उठ्ने भन्ने हो । माकुने, ओलीहरूले नेतृत्व गरेको एमालेको एउटा गुट र कांग्रेसभित्रका भारतका मित्रहरू -दलालहरू) यो देशलाई स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्रका रूपमा उभिएको देख्न चाहँदैनन् । त्यसकारण शान्ति र सत्यको विरुद्ध युद्ध र झूटको सहारामा उनीहरू अगाडि बढ्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।
५. उनीहरू नेपाली जनताको पछिल्लो अभिमत जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचन सबैलाई अपमान र अपहेलना गर्न चाहन्छन् । किनकि नेपाली जनता उनीहरूको पक्षमा छैनन् भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । सत्यको प्रचारबाट जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसकिने भएपछि झूट, अशान्ति र हिंसाको सहारा लिनु प्रतिक्रियावादीहरूको धर्म हो । माकुनेलगायतका शक्ति त्यसो गर्न बाध्य छन् । यी बकवास यसैका उदाहरण हुन् ।
तसर्थ, कार्की हत्या माओवादीले गर्‍यो भन्ने माकुनेहरूको बकवास-राजनीतिको पोल अन्य घटनाझैँ ढिलोचाँडो खुल्ने नै छ । यस्ता बकम्फुसे कुरा नेपाली जनताले पत्याएका थिएनन् र फेरि पनि पत्याउने छैनन् । बरु यस्ता आपराधिक राजनीतिक प्रवृत्तिको जवाफ नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण ढंगले दिँदै आएका छन् र दिँदै जानेछन् । यस्ता बकवास-राजनीतिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न र राष्ट्रको समृद्धि प्राप्त गर्न नेपाली जनता एकजुट बन्ने अभियानलाई रोक्न सक्दैन ।